कसरी फायरफक्स मा ईतिहास र कुकीहरू मेटाउने ग्याजेट समाचार
फायरफक्समा ईतिहास र कुकीहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने?
यदि तपाईं फायरफक्समा दैनिक इन्टरनेट ब्राउज गर्नुहुन्छ भने, अन्य अरू ब्राउजरहरूमा तपाईंसँग अलिकता फाइदा हुन सक्छ, किनकि यसमा तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। निजीकरण केहि पहलुहरु जुन गोपनीयता समावेश छ। विशेष रूपमा, हामी इतिहास र कुकीहरू प्रबन्ध गर्न सक्ने तरिका हामीले अरू कुनै ब्राउजरमा प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दा सजिलो केहि छ।
उदाहरण को लागी, यदि केहि पनी वेब पेजहरु देखाईएको छ कि तपाईले अनुरोध गर्नुभएन र तपाईले त्यसलाई तपाईको ईतिहासबाट हटाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले चुपचाप निजीकृत तरीकाले गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी सूची खाली नगरीकन। उस्तै स्थिति कुकीजको साथ पनि गर्न सकिन्छ, त्यो हो, हामीले ती सबैलाई समाप्त गर्नुपर्दैन तर केही हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनसक्दछ। अरू कसैले देख्नु हुँदैनसबै थोरै सल्लाह र युक्तिहरू छन् जुन हामी तपाईंलाई तल दिन्छौं।
1 मोजिला फायरफक्समा इतिहास प्रबन्ध गर्न विभिन्न तरिकाहरू
2 छनौट कुकीहरू मेटाउँदै
मोजिला फायरफक्समा इतिहास प्रबन्ध गर्न विभिन्न तरिकाहरू
चाहे हामी ब्राउजि history ईतिहासको केहि वेब पृष्ठहरू हेरफेर गर्न चाहन्छौं, वा हामीले फायरफक्समा व्यक्तिगत तरीकाले केहि कुकीहरू प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ, दुबै तत्वहरू हुनुपर्नेछ यस ब्राउजर भित्र उही वातावरण बाट व्यवस्थापन; यो गर्नका लागि, हामीले निम्न ठाउँमा त्यो स्थानमा पुग्नुपर्दछ:
हामीले हाम्रो मोजिला फायरफक्स ब्राउजर खोल्नै पर्छ।
अब हामी विकल्प क्षेत्र (विकल्प -> विकल्प) प्रविष्ट गर्ने छौं।
देखाइएको विन्डोबाट हामीले ईन्टरफेसको माथि अवस्थित रिबनको "गोपनीयता" मा जानुपर्दछ।
यो यस क्षेत्रमा छ जहाँ हामी काम गर्न केहि समय समर्पित गर्दछौं। यहाँ हामी very एकदम राम्रो विभेदित सेक्सनहरु लाई प्रशंसा गर्नेछौं:
यस समयमा हामी फायरफक्स ब्राउजिंग ईतिहासमा सम्बन्धित सबै चीजहरू व्यवहार गर्ने जिम्मेवार छौं, त्यसैले हामी यस कार्य क्षेत्रमा मुख्य ध्यान दिनेछौं। छिटो र प्रभावशाली ढ admin्गले प्रशासन गर्न हामीसँग त्यहाँ केही विकल्पहरू छन्। उदाहरण को लागी, यस क्षेत्र को पहिलो भाग मा त्यहाँ एक विकल्प छ:
फायरफक्स सक्षम हुनेछ:…
त्यहाँ हामीसँग ड्रप-डाउन बटन छ, जहाँ हामी छनौट गर्न सक्दछौं यदि हामी इतिहास बचत गर्न चाहन्छौं वा केवल त्यस्तै यो वेबमा हामीले गरेका सबै भ्रमणहरूमा दर्ता गरिएको छैन। पूर्वनिर्धारित रूपमा, यो विकल्प "इतिहास सम्झनुहोस्" मा फेला पर्‍यो, यो नै कारण हो कि हामीले भ्रमण गरेको प्रत्येक वेब पृष्ठ सूचीमा दर्ता हुनेछ।
अलि अलि तल लि option्क (निलो) को रूपमा विकल्प छ, जसले saysतपाईंको भर्खरको ईतिहास खाली गर्नुहोस्«; यदि हामीले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने, हामी अर्को साना पप-अप विन्डोमा हाम फाल्नेछौं, जहाँ हामी इतिहास सफा गर्न सक्दछौं जुन एक घण्टा अगाडि उत्पन्न भएको थियो वा धेरै अगाडि।
हामी पनि यस इतिहासको छनौट उन्मूलन गर्न सक्छौं, किनकी केहि अलि तल त्यहाँ केहि विकल्पहरू छन् जुन त्यसको बाकसको माध्यमबाट सक्रिय हुन सक्दछ कि त्यो क्षणमा तिनीहरूलाई हटाउनको लागि। यदि हामी यस विकल्पको लागि जान्छौं भने मात्र हामीले यी बक्सहरू छान्नुपर्नेछ र त्यसपछि बटनले "अब सफा गर्नुहोस्" भन्छ। र अधिक केहि छैन।
छनौट कुकीहरू मेटाउँदै
लिंकको एक पक्षमा जुन हामीले पहिले क्लिक गरेका थियौं र यसले हामीलाई भर्खरको ईतिहास सफा गर्न अनुमति दियो, त्यहाँ एक अतिरिक्त छ, जसले हामीलाई सघाउन मद्दत गर्दछ। Cookies व्यक्तिगत रूपमा कुकीहरू मेटाउनुहोस् » वा हामी यो भन्दछौं, एक व्यक्तिगत तरीकाले।
यो सबैमा सब भन्दा चाखलाग्दो अंश हो, किनकि यस लि on्कमा क्लिक गर्दा पप-अप विन्डोलाई पनि चाखलाग्दो विकल्पहरूको साथमा ल्याउँदछ ताकि हामी काम गर्न सक्दछौं। यो विन्डोमा सबै कुकीहरू जुन दर्ता गरिएको छ देखा पर्नेछ हाम्रो इन्टर्नेट ब्राउजि through को माध्यम बाट। शीर्षमा "खोजी" गर्न खाली ठाउँ छ, जहाँ हामी सम्बन्धित सबै कुकीहरू देखा पर्नको लागि केवल शब्द राख्नुपर्नेछ।
उदाहरण को लागी, यदि भनिएको खोज स्पेसमा हामीले शब्द यूट्यूब लेख्यौं भने, तिनीहरू तुरुन्तै तल देखा पर्दछन् हामीले भ्रमण गरेका सबै पृष्ठहरूको सूची र त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यस भिडियो पोर्टलमा सम्बन्धित छ। यदि हामी यी कुकीजहरू (जुन ईतिहासको अंश हो) यहाँ रेजिष्टर गर्न चाहँदैनौं भने हामी केवल ती सबैलाई मात्र चयन गर्नुपर्नेछ जुन हामी हटाउन चाहन्छौं। यसको लागि हामी दुबै कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्छौं एक साथ वा टाढा कुकीहरू चयन गर्न सक्षम हुन CTRL को रूपमा सिफ्ट गर्नुहोस्, यदि हामी ती सबै एकै चोटि हटाउन चाहँदैनौं भने।
जैसा कि तपाइँ प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले कुकीहरू र केही पृष्ठहरूको उन्मूलनको लागि अपनाएको प्रक्रिया जुन हाम्रो ब्राउजि history ईतिहासको एक हिस्सा हुन् मोजिल्ला फायरफक्समा गर्न सजिलो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » फायरफक्समा ईतिहास र कुकीहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने?
एकल मर्जमा बहु हटमेल खाताहरू कसरी राख्ने